As cases of the virus continue to rise across Washington, the state could need to once again tighten up its restrictions, meaning more people could be left without work and in need of more assistance.
New York topped the list in the study of where people needed loans the most amid the novel coronavirus pandemic.
Maryland came in second on the list in the study of where people needed loans the most amid the novel coronavirus pandemic.
Illinois came in third on the list in the study of where people needed loans the most amid the novel coronavirus pandemic.
Virginia came in fourth on the list in the study of where people needed loans the most amid the novel coronavirus pandemic.
Indiana came in fifth on the list in the study of where people needed loans the most amid the novel coronavirus pandemic.